ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमाको महत्व यस्तो छ - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
Dec 05 2020 | २०७७, मंसिर २० गते
हेर्नुहोस् वि.सं.२०७७ साल मंसिर २० गते शनिबारको राशिफल
तीन अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति सार्वजनिकरूपमा कोरोनाविरूद्धकाे खोप लगाउन तयार
वाइडबडी खरिद र ३८ क्विटल सुनको तस्करी हुँदा सत्तामा को थियो ? प्रधानमन्त्री ओली
गोकुल बाँस्कोटाले भने : नेकपा फुट्न पनि सक्दैन, फुट्न पनि दिइने छैन
अर्थमन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना मगरलाई भेटेर दिए बधाई
राजावादीहरुको प्रदर्शनमा बम हान्ने बिप्लवको चेतावनी, भारतकी छोरी हिमानीलाई सत्ता दिन सकिदैन
# नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
# नेत्रविक्रम चन्द "विप्लव"
# हिमानी शाह
# ईश्वर पोखरेल
ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमाको महत्व यस्तो छ
शुक्रवार, कार्तिक १४ २०७७
पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह हो चन्द्रमा । नव ग्रहमा चन्द्रमालाई रानी मानिन्छ । चन्द्रमालाई काल पुरुषको मन भनिन्छ ।
चन्द्रमालाई शिवजीले आफ्नो जटामा स्थान दिईएका थिए त्यसैले चन्द्रमाको अर्को नाम सोम पनि हो । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार चन्द्रमाको गति अन्य सबै ग्रहहरु भन्दा छिटो छ ।
चन्द्रमा एक राशिको पार गर्न सवा दुई दिन लगाउँदछ । चन्द्रमा कर्कट राशिको स्वामी हो । वृष राशीको ३ डिग्रीसम्म उच्च राशिको फल प्रदान गर्दछ भने ३ डिग्री भन्दा धेरै छ भने मुल त्रिकोणको फल प्रदान गर्दछ ।
चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा निचो फल प्रदान गर्दछ । चन्द्रमाले सूर्य तथा बुधलाई आफ्नो मित्र मान्दछ भने अन्य ग्रहलाई सम मान्दछ । चन्द्रमा रोहिणी,हस्त र श्रवण नक्षत्रको स्वामी हो ।
चन्द्रमा वायव्य दिशाको स्वामी मानिन्छ । चन्द्रमालाई मन तथा माताको कारक मानिन्छ । चन्द्रमा वैश्य तथा स्त्री ग्रह हो । चन्द्रमाले सेतो कलरको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने चन्द्रमाको रत्न मोती हो ।
मोती २,४,६,११ रत्तिको शुक्लपक्षको सोमवार वा रोहिणी नक्षत्रको दिन पारेर धारण गर्नाले शुभ फल प्राप्त हुन्छ । ७,८ रत्तिको धारण गर्नु हुँदैन । चन्द्रमा कुण्डलीमा चौथो स्थानमा दिग्बली हुन्छ । चन्द्रमाले आफू बसेको स्थानबाट सातौँ स्थानमा दृष्टि दिन्छ ।
चन्द्रमाको महादशा १० वर्षको हुन्छ भने त्रिभागीमा चन्द्रमाको दशालाई ६ वर्ष गणना गरिन्छ । चन्द्रमाको धातु चाँदी हो । चन्द्रमा जन्मकालिन राशिबाट पहिलो,तेस्रो छैटौँ, सातौँ, दशौँ र एकादश स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्दछ ।
जन्मकालिन चन्द्रमाबाट गोचरमा चौथो,अष्टम तथा बाह्रौँ भावमा अशुभ फल प्रदान गर्दछ । खगोलिए दृष्टिले चन्द्रमालाई ग्रहको सुचीमा राखिएको छैन ।
चन्द्रमालाई पृथ्वीको उपग्रह मानिन्छ । ज्योतिष विज्ञानले भने चन्द्रमालाई ग्रहको दर्जा दिईएको तथा व्रम्हले चन्द्रमालाई ग्रहमा नव ग्रहको दर्जा दिईएको पाईन्छ ।
पृथ्वीबाट चन्द्रमा ३ लाख ८४ हजार किलोमिटरको दुरिमा अवस्थीत छ । चन्द्रमा पृथ्वीलाई एक चक्कर लगाउन २७ दिन लगाउँदछ । चन्द्रमाको शक्ती क्याल्कुलेशन गर्नको लागि पक्षबल हेर्न जरुरी हुन्छ ।
सूर्यबाट १२ डिग्रीको अन्तरमा एक तिथी बन्दछ । सूर्य तथा चन्द्रमाको ० डिग्रीको अन्तरलाई अमावश्य भनिन्छ । जब चन्द्रमा सूर्यबाट अगाडी बढ्दै जान्छ त्यसलाई शुक्ल पक्ष मानिन्छ ।
१५ दिन पछि १८० डिग्रीको अन्तर हुन्छ जुन तिथीलाई पूर्णिमा कहिन्छ । पूणिमाबाट सूर्यतिर नजिक हुदै गर्दा कृष्ण पक्षको सुरुवात हुन्छ जहाँ चन्द्रमाको बल घट्दै जान्छ । चन्द्रमा यूवा वा प्रौढ दुबै हो । चन्द्रमा जलको देवता हो ।
चन्द्रमा यस,मुखकान्ती,जलीय स्थान,आयात निर्यात,होटल,माछा,तरल पदार्थ ईत्यादिको कारक हो ।
चन्द्रमा औषधी,जल,मन,माता,वुद्धिमता,प्रजनन् सम्बन्धी रोग,गर्भाशयबाट हुने रोग,जलबाट हुने रोग,रगत,नेव्रे आँखाको कारक मानिन्छ ।
यसको अतिरिक्त कल्पना,रात्री,स्त्री,विदेश यात्रा, धनसम्पती,सेता वस्तु,निन्द्रा,मनको प्रशन्नता,चादी,दुध,रेष्टुरेन्ट,समुन्द्रीक यात्रा,चिन्ताको कारक ग्रह चन्द्रमा हो ।
चन्द्रमा पीडित भयो भने डिप्रेशन तथा छाति सम्बन्धी समस्या देखा पर्दछ । वैश्य जाती चन्द्रमा वर्षा ऋतुको कारक ग्रह हो । चन्द्रमा कुण्डलीमा स्वराशी,उच्च,मित्रराशी तथा शुभ ग्रहसँग भए,शुभ ग्रहले दृष्टि दिए, पक्ष बली भए वा शुभ कर्तरी भए चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दछ ।
ज्योतिष विज्ञानमा चन्द्रमाबाट बिभिन्न योग बन्दछ । चन्द्रमा र शनिको यूक्ति विषयोग,चन्द्र र वृहस्पतिसँगै केन्द्रमा भए गजकेशरी योग,चन्द्रमाबाट दोस्रो र बाह्रौँ भावमा कोही ग्रह नभए केमद्रुम योग, चन्द्रमाबाट दोस्रो र बाह्रौँ दुईभावमा मंगल,वुध,शुक्र गुरु,शनि कुनै पनि ग्रह भए दुर्धरा योग हुन्छ ।
चन्द्रमाबाट दोस्रो भावमा कुनैपनि ग्रह भए सुनफा योग हुन्छ । चन्द्रमा बाट बाह्रौँ भावमा कुनै ग्रह भए अनफा योग बन्दछ । यसै गरी चन्द्रमाबाट छैटौ,सातौ र आठौँभावमा एक एक नैसर्गिक शुभ ग्रह भए चन्द्रधी योग बन्दछ ।
चन्द्रमाबाट छैटौँ वा आठौँ भावमा गूरु भए सकट योग बन्दछ । चन्द्रमाबाट दशम भावमा नैशर्गिक शुभ ग्रह भए अमल कृती योग बन्दछ । चन्द्रमा र मंगलको यूक्ति कुण्डलीमा भए धन योग बन्दछ ।
चन्द्र राहकेतुको युक्ति ग्रहण योग बन्दछ । यदि कुनै पनि ग्रह निचो भएर चन्द्रमाबाट केन्द्रमा भए निच भंग हुन्छ । चन्द्रमा पाप प्रभावमा भए मानिस डिप्रशन,उन्मत्त,पागलपन हुने अधिक सम्भावना हुन्छ ।
तपाईको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर छ भने चन्द्रमाको बैदिक मन्त्र
ॐ इमन्देवाऽअसपत्क्न गुँ सुवद्ध्वम्महतेक्षत्रायमहतेज्यैष्ठ्याय महतेजानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ।
इमममुष्यपुत्रममुष्यैपुत्रमष्यैविशऽएषवोमीराजासोमोऽस्माकम्व्राह्मणना गुँ राजा ।।
अथवा चन्द्रमाको तान्त्रिक मन्त्र
ॐ सों सोमायनमः
जप सख्या ७०००,देवीपूजाः ।
शुक्रवार, कार्तिक १४ २०७७११:५७:४९
नेपाल सरकारको कानून, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघका आचारसंहीता तथा विधान लगायतमा उल्लेखित नीति नियमको पालना गर्दे समाजमा उत्तरदायी पत्रकारिताको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता सहित सुसूचित नेपालको चित्र स्लोगन राखि अनलाइनपाना डटकम २०७२ चेत्र ०८ गतेदेखि सञ्चालानमा छ । हाम्रो अनलाइन मिडिया अन्तर्गत प्रकाशन, प्रशारण हुने समाचारहरु देश, जनता, समाज र हरेक नागरिकको जीवनहरुसंग जवाफदेही हुनेछन् । ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरु जनताको हितमा मात्र प्रयोग हुने विश्वास दिलाउछौं ।
हेर्नुहोस् वि.सं.२०७७ साल मंसिर १९ गते शुक्रबारको राशिफल
हेर्नुहोस् वि.सं.२०७७ साल मंसिर १८ गते बिहीबारको राशिफल
जाडोमा रैथाने स्वाद : खानुहोस् ढिडो र गुन्द्रुक
सरकार ! अस्वीकार्य हुनुपर्ने प्रतिवेदन कि भ्रष्टाचार : १७ देशको अध्ययन मोडेल नेपालमा किन अस्वीकृत ?
३९६ अस्पताल सिलान्यास हुँदा डा. संग्रैलाको ब्यंग्य
बलात्कार अन्त्य गर्नमा कहाँ चुक्यो नेपाली समाज ? - डा. डिला संग्रौला
समाचार राजनीति अन्तरवार्ता सम्पादकीय टिप्पणी अर्थ प्रदेश खेलकुद
Copyright © 2020 All right reserved to Onlinepana.com